Tag: nharembozha yevhidhiyo
Google yakangoburitsa mhedzisiro yekuyedza kutsva iyo inokatyamadza uye inofanira kutariswa nechero ani anotarisa kuwedzera vhidhiyo yayo kusvika kune nharembozha. Zvichitaurwa zviri nyore, iyo iri kumeso kwako kushambadzira modhi yezuro chete haishande pane yedu nhare mbozha. Kushanda neMountain Dew, BBDO yakaburitsa mavhidhiyo matatu akasiyana. Yekutanga yaive yekuisa terevhizheni kushambadza pane nhare mbozha. Yechipiri yaive yekukanda kushambadzira kuiswa kune vanoona nhare